जसपा अब प्रधानमन्त्रीको दौडमा ! Canada Nepal
जसपा अब प्रधानमन्त्रीको दौडमा !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले केपी ओलीको सरकार जोगाउन निर्णायक बनेको कारण जसपाका नेताहरुको दौडधूप बढ्दो छ । आज मात्रै जसपाका नेताहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासंग छलफल गरेका छन् भने हिजो बेलुका मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग छलफल गरेका थिए ।
जसपा भित्र अहिले आन्तरिक विवाद समेत बढेको पाईन्छ । केपी शर्मा ओलीसंग मिलेर जान बहुमत सदस्य तयार हुँदा डा.बाबुराम भट्टराई भने माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससंग मिल्नुपर्ने जोड दिईरहेका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्न उपसभामुख देखि प्रधानमन्त्री सम्मको अफरको कुराहरु बाहिरिएको छ । चुनावी सरकार जसपालाई दिने अफर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको समेत चर्चा चल्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा अहिले जसपापनि लागेको छ । यहि दौडका कारण भित्रिएको विवादले गर्दा आज जसपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेन । संसदीय दलको नेताको लागि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो बीच कुरा मिल्न सकेको छैन । पार्टी एकीकरण समयमा राजेन्द्र महतोलाई बनाउने सहमति गरेपनि अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने दौडले गर्दा अन्य ३ नेताहरु बीच सहमति हुन सकेको छैन ।
संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुने भएकाले आज बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेको जसपाका एक नेताले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अफरमा को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन गार्हो परेकोले आज चयन हुन नसकेको हो ।
जसपाका एक नेताले भने, "महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई मध्य कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अरु दल तयार हुन्छन उसैलाई मात्र अब संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भन्ने भित्रि सहमति जस्तो भएर आजको बैठक टुंगिएको छ । तर अझै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसंग छलफल गर्न बाँकी रहेकोले निर्णय सम्भवत आउने हप्ता तय हुने जानकारी पाएको छु ।"
फाल्गुण २८, २०७७ शुक्रवार २२:३५:०४ बजे : प्रकाशित